Isaziso kwi-Ayurvedic Transdermal Herbal Rasayanas
Isingeniso kwiRayayanas yeTransal Transbermal
Ukuphulukiswa okutshintshisayo kuphulukisa phakathi kwesikhumba. Esi sicelo sesicatshulwa sichazwe ngokubanzi kwiimibhalo ezininzi ze- ayurvedic zasendulo kunye nomsebenzi osekude we-ayurvedic dermatologists.
Lo mkhuba ubizwa ngokuba yi 'marma therapy' kunye neentlobo ezahlukeneyo zithatha iindlela ezahlukeneyo zokuyisebenzisa. Kwizona zinto ezisisiseko, i-marmas ibhekisela kumaqondo angama-107 emzimbeni odibanisa ingqondo nomzimba.
Le yimihlaba ekugxilwe kuyo apho izilwanyana zenzelwe ukuphilisa. Ngokuqhelekileyo, oku kwenziwa ngeoli okanye ama-pastes asetyenziswayo kwaye afakwa ngesikhumba.
Kutheni i-Transdermal Formulations?
Ngokuqhelekileyo, iindlela zokuphilisa eziqhelekileyo zijolise ekudleni okanye ekuphuzeni kweziyeza zamachiza. Le nto ayisoloko iyona ndlela ihamba phambili, kwaye kutheni izicelo ezisetyenzisiweyo zisetyenziswa.
Xa sisitya isityalo, isiphumo sayo siya kuthinteka ukuba:
Inkqubo yokugaya ayisebenzanga ngokuphumelela kwintsebenzo kwaye ayikwazi ukuhlaziya kakuhle imifuno.
Inkqubo yokugaya iphumelele kodwa isibindi sinobuqili okanye sithwele umthwalo onobuthi.
Umntu uyadla utywala rhoqo.
Umntu uthatha amayeza okanye ezinye izongezo.
Zonke ezi zinto "ziphazamisa" ngengqondo yenkcaso kwaye unokuba ungava nantoni na ukuyithatha. Izinto ezithintekayo zigqithise inkqubo yokutya kwaye zihambe ngqo kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba nge- rakta dhatu okanye igazi.
Inzuzo abayinikezayo ayincitshiswe ngogonyamelo olucothayo okanye isibindi esicinezelekileyo.
I-Transdermal Rasayanas isebenza njani
Ukususela kumbono we-ayurvedic, kukho i- subdoshas emithathu- imithetho ye- psychophysiological - elawula impilo yesikhumba nokubonakala. Xa ezi zintathu ze-subdoshas zilingana, ulusu lujongene nempilo epheleleyo.
UVyana Vata ulawula ukusabalalisa kwesikhumba kwaye ulungelelanisa umxholo wokuthintela.
I-Bhrajaka Pitta ilawula ukufudumala kwesikhumba kunye neenkqubo ze-biochemical ezenzeka esikhumbeni.
UShakhakahaka Kapha ulawula amanqanaba omswakama kunye ne-lubrication.
Ngaphandle kwezi-subdoshas, ​​kukho i- agni - umlilo-ohlala ekhumbeni. Njengokuba sinomlilo we- Pachaka Agni okanye isisu esiswini esisiswini ukuze sincedise ukutya okutya esikudlayo, kukho i- Bhrajaka Agni kwesikhumba esilungisa nantoni na isetyenziswe esikhumbeni. Ngelishwa, abaninzi abaphili bama-ayurvedic abazi okanye baqonda ngokupheleleyo uhluko okhoyo phakathi kwe-Bhrajaka Pitta subdosha kunye ne-Bhrajaka agni.
I-Pachaka Pitta kwindawo yesisu ngu-subdosha olawula ukugaya, kodwa akuyilo ilangabi ngokwalo, ngumthombo osisiseko somlilo. I-Pachaka Agni ngumlilo ohambelanayo "opheka" ukutya. Ngokufanayo, uBhrajaka Agni elukhumbeni upheka ukutya okusetyenziswe elukhumbeni, ngoxa uBhrajaka Pitta ngumthombo welangatye.
Ukuqonda lo mmahluko kuyimfuneko yokuphuhlisa iiprotokholi ezifanelekileyo ze-ayurvedic ukuze uphilise phakathi kwesikhumba.
Ukusetyenziswa kweeHermbs Healing
Kukho olunye uhluko omele luphawulwe phakathi kwe-metabolizing eyenzekayo xa uphilisa iirebe zitshitshiswa kwaye xa zisetyenziselwa ukudluliselwa.
Le yindlela yokwenza "ukupheka" kwisisu ngokubhekiselele kwiphepha.
Ukupheka okwenzeka esiswini kunokuthelekiswa neengcingo zokupheka okucothayo kwiphuko elityelweyo, umzekelo. Igama elithi Pachaka lihambelana negama elithi pak , okubhekisela ekuphekeni okucothayo okanye okuphekwe. Igama elithi Bhrajaka linxulumene ne- bhanjan , eliguqulela ngokuqondile "ukucima."
Xa sisebenzisa into esikhumbeni, ubuso besikhumba baba yikhi kwaye uBhrajaka Pitta unikeza ilangatye - uBhrajaka Agni - oko "kupheka" "ukutya" kokungena ngokukhawuleza kwigazi.
Ukuze i-absorption ifumaneke ngokufanelekileyo, kukho iimpawu ezithile ezifunekayo eziphathekayo. Inqununu phakathi kwezi:
Izinto ezifunekayo mazibe ngama-100 ekhulwini kwaye ziphila kunye nobunzima bendalo. Ukuba iqhutywe ngeekhemikhali okanye ixutywe kunye nezilondolozo zokufakelwa okanye iziqhumiso okanye zithintele ezinye izinto, umphumo wokuphulukisa uya kuphazamiseka.
Izinto eziphathekayo kufuneka zibe yayizikhulu zee-molecular kunye nesisindo esifanelekileyo, ukuxhamla ngokukhawuleza. Ifomula kufuneka ibe nezinto ezithile ze- yogavahi - iitrob, iziqholo, okanye i-aromas ezikunceda ukuqhuba inzuzo yefomula kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba.
Izinto ezifunekayo mazibe mnandi okanye zithandeke ukwenzela ukuba imvelo ibambelele. Ukuba loo nto ibuyele, i-physiology ayiyi kuyifumana ngentliziyo yonke.
Ukubonelela ngemilinganiselo yasendulo yokuhlanzeka kunye ne-potency ilandelwe ngokucophelela, i-rasayanas esetyenziselwayo inika indlela entsha enomdla wokubonelela ngeenzuzo zokuphilisa ii-ayurvedic zityalo kwi-physiology. Oku kunokukunceda umntu ukuba akhokele ubomi bokulinganisela ngokuhambelana nemithetho yeNdalo.
Qaphela: Le ngcaciso imfundo, kwaye ayihloselwe ukunyanga, ukunyanga, ukukhusela okanye ukunciphisa nasiphi na isifo. Ukuba unesifo sezempilo, nceda ubone ugqirha wakho.
I-United States neJapan Emva kweMfazwe Yehlabathi II
Abameli bePenn State Harrisburg
UQoqosho njengoko "i-Dismal Science"
Imisebenzi emfutshane yegrama kunye nezifundo ezikhawulezayo
Isibetho seFant Death
I-Pequot War: 1634-1638
Izilwanyana kunye nezidalwa zaseNtshonalanga zaseYiputa
Izibingelelo eziqhelekileyo zama-Islamic Ramadan Holidays
Ngaba Ingqungquthela kaBarack Obama ibonisa iArabhu?